FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA BEABULL - ALIKA
Alika mifangaro beagle / Bulldog mifangaro
Big Boy the Beabull amin'ny faha-4 taonany— 'Big Boy io. Izy no alikako voalohany. Izy dia mifangaro eo anelanelan'ny English Bulldog sy Beagle. Nitaiza azy aho hatramin'ny nahaterahany. Tena be fitiavana, marani-tsaina ary tia olona. Kamo be izy, nefa tia milalao any ivelany rehefa mahatsapa ho hyper. Tiako ny fidradradradrany. Miambina ny tranonay izy ary mpikambana ao amin'ny fianakavianay. '
Ny alika Beabull dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Beagle ary ny Bulldog . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Cooper, Beabull 9 volana antsika. Nahazo azy izahay tamin'izy 8 herinandro. Tiany ny milalao tosika sy mandeha mitsangatsangana . Izy dia mety ho kamo be indraindray ary misy fotoana hafa tia ny any ivelany milalao karazana baolina. Izy dia mandinika be fantatra amin'ny hoe legging legg. Tiako fotsiny rehefa manao an'io izy. '
Big Boy the Beabull amin'ny faha-4 taonany
manao ahoana ny haben'ny haben'ny bulldogs
Harvey aka 'Harvey Bear' the Beabull toy ny alika kely amin'ny 8 herinandro— 'Harvey dia zazalahy tsara tokoa. Izy dia be fitiavana, falifaly, milalao, sakaiza mpiambina tsara indrindra ary tena hendry. Tiany ny milalao baolina, mandehana mandeha SY hifanerasera amin'ny olombelona ary alika hafa . Izaho sy ny sakaizako dia nitaiza azy hatramin'ny faha-8 taonany. Kamo foana izy amin'ny maraina ary tia mifoha maraina! Tiako be ny zanako! '
Ollie ny Beabull toy ny alika olon-dehibe— 'Ity no Ollie, malalako malalako. Afangaro 60/40 izy. Tiany ny mandainga amin'ny fomban-drazana Bulldog nentim-paharazana, mandray ny ankamaroan'ny faritra misy azy. Ollie dia telo taona ary milanja 63 lbs. Raha mieritreritra aza izy fa naheno anao nilaza hoe 'tady' izy dia mihazakazaka mitady azy ary milalao. '
Ollie ny Beabull toy ny alika olon-dehibe mitsiky amin'ny fakantsary.
Ollie the Beabull ho alika olon-dehibe tazomin'ny tompony.
Ollie the Beabull toy ny alika kely matory ary mivoaka ny lelany.
Ollie ny Beabull toy ny alika alika any ivelany amin'ny ahitra.
Claudette the Beabull amin'ny faha-3 taonany— 'Niverina tany amin'ny toeram-pialofana i Claudette intelo ary teo am-pelatanan'ny fahafatesana no nifankahitanay. Claudette dia clown iray izay tia manetsiketsika ny fon'ny olona rehetra mihaona aminy. Tiany ny mandeha mitsangantsangana, mitaingina fiara ary misolelaka. Manana anadahy roa sy rahavavy iray i Claudette volom-borona ary namana alika be dia be. Ary ambonin'izany rehetra izany dia tia milalao baolina kitra ary hitady ny baolina kitra sy ny baoritra raha mbola misy mandaka azy. '
'Ity no alika Rooney. Izy dia mifangaro Beagle / Bulldog. Mampihomehy tanteraka izy. Tiany ny mandeha mitsangatsangana , toy ny tsy maintsy tsipelina azy w-a-l-k. Mandry amin'ny tongony fisaka amin'ny tany izy, toy ny Bulldogs. Hainy ny mipetraka, mijanona, mihozongozona ary mihodina, ary niara-nijery ny Dog Whisperer izahay ary ankehitriny dia mila miandry hihinana ny sakafony mandra-pitenintsika hoe 'okay.' Tsy tia legioma na voankazo izy, fa hangataka izany ary tia milomano ao anaty dobo. '
'Ity ny alikako Maggie amin'ny 11 volana. Izy dia mixer Bulldog / Beagle anglisy. Maggie dia 50/50 amin'ny karazany fotsiny. Na dia be hyper toy ny Beagle aza izy, dia mety kamo ihany koa toy ny Bulldog. Mandany na inona na inona izy ary amin'ny zavatra rehetra. Nefa amin'ny faran'ny andro, reraky ny filalaovana dia afaka ho be fitiavana izy! Tiako ity hybrid ity ary tena faly aho manana azy ao amin'ny fianakaviana! '
'Ity no Duke, Beabull 10 volana. Alika tena tsara i Duke. Tiany ny mihazakazaka eny an-tokotany ary mikoropaka ao an-trano. Tena mafy loha izy ary sarotra ny mampiofana satria nanana ny heviny momba ny fiofanana izy. Tena manan-tsaina izy ary hanandrana hanalavitra anao amin'ny zava-drehetra. Raha manafina ny gana ao an-trano izy ary ento any ivelany mandritra ny ora maro dia ho tonga ao an-trano izy ary hahita ny gana avy hatrany. Duke dia manana vatan'ny Bulldog, lohan'ny Beagle, ary ny fihetsiky ny Bulldog. Tena be fitiavana izy ary te ho eo akaikinao foana. Ny tsara indrindra dia ny fanaovana a mandeha isan'andro ary fitsangatsanganana matetika any ivelany. Milanja 54 lbs izy izao. ary tena salama. Tsy mivoraka izy fa hanome anao ny fidradradradrana indraindray. Tena mandinika izy ary handainga toy ny Bulldog eo am-pijerena fahitalavitra. '
'Lola, fifangaroantsika Beagle / Bulldog tamin'ny 1 taona — Bulldog anglisy ny reniny ary Beagle mpifanila vodirindrina ny dadany ... fifandraisan'ny fitiavana izany! Lola 1 taona mahery kely izao ary milanja 50 lbs. Nahazo toetra izy! Maniry ny hampifaly anay, milalao sy be fitiavana. Ity no alika tsara indrindra nananako! '
sarin'ireo terriers yorkshire kely indrindra
Lola the Beabull (alika hybrid Beagle / Bulldog) amin'ny taona 1
Lola the Beabull (alika hybrid Beagle / Bulldog) amin'ny taona 1 maniry hilalao!
Lola the Beabull (alika mena (Beagle / Bulldog hybrid) alika kely amin'ny 3 volana
Sary Beabull 1
Sary Beabull 2
Alika kely amin'ny ady totohondry 12 herinandro
Caucasian mpiandry ondry alika toetra tony tsara ny andro
pyrenees be sisin-tany collie mix karazany